Brighton Vs Man United – iftiin fm
Naadiga Man United ayaa marti u noqonaysa kooxda Brighton kulan ka dhici doona garoonka The American Express Community Stadium kana tirsan todobaadkii 32-aad ee horyaalka La Liga.
Naadiga Red Devils ayaa kulanka soo galaysa iyaga oo isha ku haya guul si ay u sii wadaan rikoodhkooda guuldaro la’aanta ah ee sanadka 2020 iyo waliba in ay cadaadiska sii saaraan kooxda chelsea ee kaalinta 4-aad ku jirta.
Sido kale kooxda ku ciyaarta garoonka The American Express Community Stadium ee Brighton ayaa kulanka soo galaysa iyaga oo u dagaalamaya sidii ay u sii joogi lahaayeen horyaalka premier League xilli ciyaareedkan ugana fogaan lahaayeen boosaska looga hadho horyaalka.
Garoonka: The American Express Community Stadium
Manchester United ayaa laga badiyay labadii kulan ee Premier League ee ay martida aheyd Brighton Kaliya kooxaha Chelsea (2003-2006), Everton (2012-2015), Liverpool (2008-2011), Southampton (1996-1998) iyo Tottenham (2016-2018) ayaa laga badiyay seddex kulan oo isku xigta oo Premier League oo ay la ciyaarayeen koox ka soo horjeed.
Dhamaan shantii kulan ee Premier League ee udhaxeeyey Brighton iyo Man Utd waxaa badiyay kooxda garoonkeeda lagu ciyaaryo waana kulanka ugu badan ee ay 100% kooxda martida loo yahay badisay.
Brighton ayaan laga badinin seddexdii kulan ee ugu danbeysay ee Premier League iyaga oo 3-daas kulanba ka hor tagay kooxaha ku jiray 10- kaalin ee ugu sareeya kuwaas oo kala ah Wolves, Arsenal iyo Leicester City markii ugu dambaysay ee ay intaas ka badan guuldaro ahaayeen horyaalka waxa ay ahayd January-March 2018.
Manchester United ayaa shabaqeeda ilaashatay 7 ka mid ah 12-kii kulan ee ugu dambeeyay ee Premier League waana in ka badan 40-kii kulan ee hore ee uu kooxda hogaaminayay tababare Ole Gunnar Solskjær.
← Dhakhaatiirta Caafimaadka iyo Ururka Dhakhaatiirta ilkaha ee KMPDU oo shaqa joojin ku hanjabay.